Maqaal:-Markii umada walaalaha ah ee meel wada dagani is qiimayso ayaa dadka kalana qiimaynayaan.By Sahra Dahir mire | Codkamudug.com	Home
Friday, April 4th, 2014 | Posted by cabdulahi Maqaal:-Markii umada walaalaha ah ee meel wada dagani is qiimayso ayaa dadka kalana qiimaynayaan.By Sahra Dahir mire
Waxaan jecelahay in aan kaga hadlo maqaalkan xaalada Soomaaliya oo baryan kacsan iyada oo dadkii meel wada daganiba ay isku abaabulayaan hab qabiil ama isbahaysi si ay uga qayb qaataan nidaamka federaalka ah ee la rabo in lagu dhaqo soomaaliya .
Hadaba waxaa ah wax lala yaabo in Dowlad goboleedka Galmudug oo ka mid ah maamul goboleedyadii ugu horeeyay ee la aqoonsado inay ilaa imika aad moodo in uu khalkhalku jiro jiritaankooda ama la doonayo in khalkhal la galiyo in ay yihiin maamul goboleed ku salaysan dowlada federaalka ah ee Soomaaliyeed, Dadka khalkhalkaas horuudka u ahna ay yihiin dad ka soo jeeda Galmudug qudheeda.
Dowlad goboleedka Galmudug waxay ka mid ahayd sadexdii maamul goboleed ee ugu horeeyay ee la aqoonsado, Umana baahna maanta in la aqoonsado ama lagu soo xad gudbo dhulka ay ka taliyaan. Waxaa la gudboon dadka ka soo jeeda maamul goboleedka Galmudug in ay iyaga qudhoodu isa saxaan, Sababtuna waxay tahay waxa is burburinayaa waa iyaga qudhooda. Waxa ka jira Galmudug maamul waxa la rabay in uu maamulkaasi ku fido qaybaha kale dhulkaasi leeyahay.
Hadana waxaad moodaa in uu jiro is barbar yaac badan iyo wada shaqayn la,aan aad moodo in lagu hakinayo maamulka halkaas ka jira, Waxaan arkaysaa dad ka soo jeeda Galmudug state oo samaynaya falal lidi ku ah jiritaankooda, Markaan dadkaas falalkooda u fiirsadana waxay u eg yihiin nin geed saran oo geedka laan ka saran, oo gudin ku jaraya laantii uu geedka ka saarnaa. isaga oo aan ogayn in uu dhulka ku dhici doono. Hadaba sida aan arkay dad badan oo ka soo jeeda maamulka Galmudug ayaan daacad u ahayn maamulkooda.
Hadaba si looga baxo isbarbar yaaca iyo jifaysiga waxaan u soo jeedinayaa madaxwaynaha Galmudug Cabdi qaybdiid iyo dadka reer Galmudugba gaar ahaan indheer garadka iyo aqoonyahamkabatalooyinkan, maadaama aan ka mid ahay aqoonyahanka u dhashay Galmudug jecelahayna horumarkooda way na dhibaysaa aniga iyo dad badan oo ila mida inaad maalin walba ku andacootaan doowlada soomaaliya ayaa na diidan.
Duwlada aqoonsi ugama baahnidin bad baad leedihiin xoolo badan baad leedihiin Ganacsatadaad leedihiin , aqoonyahan baad leedihiin, ciidamaad leedihiin. idinku is aamina xaqana u hiiliya iska daaya jufaysiga iyo qolo qolada horumarka idinka hor taagan, Kuma yara dadka ka soo jeeda Galmudug dad aqoonyahan ah oo dadkooda dhibka ka saari kara, arkana sidii dhibka looga bixi lahaa .
Waxaan soo jeedinayaa, Ilaahay in aad aamintaan marka hore (allaa wayn ninkii aaminaa awood leh). Awooda ilaahay idin siiyayna aad adeegsataan.
In loo magacaabo jagooyinka dowlada sida wasiirada dad aqoon leh, daacadna ah oo aan ku salaysnayn jufo, qabiil iyo musuqmaasuq
In dadka dowladu magacowdo loo madax baneeyo shaqadooda in ay u gutaan , laguna fara galin shaqadooda
Qabiilada ama odoyaasha dhaqankuna ay faraha kala baxaan maamulka dowliga ah oo ay ku ekaadaan dhaqanka, iyo arimaha qabiilka.
In dadwaynuhu taageeraan cid kasta oo loo magacaabo xilka dowligaa ciduu doono ha ahaadee
In dadwaynuhu ay bixiyaan canshuuraha dowlada, maamul ma jiri karo canshuur la,aan.
In dadku ay midoobaan iskana daayaan qabiilka iyo wax yaabaha horumarka umada hakin kara. In laga hor tago falalka lagu fashilayo maamulka oo dad badani ay heegan u yihiin habeen iyo maalinba, Waxaan ku soo gabagabaynayaa maqaalkayga heesta ay qaadaan kooxda General daa,uud iyo hobolada waabari
Umad yahay, umadyahay Qabiilkiyo
qaranimadu waa laba aan is qaadi karinoo
waligood is qabanayn waa qori dabliyo gaasoo
hadii aan la kala qarin iyagaa is qarxinayee
qayrkeen aan gaadhnee midnimada quweeyoo
qowmiyad dadkii neceb toogadiisu yay qumine
toogadiisa ha u quminina.
Hadii ay dadka Galmudug ka soo jeeda u jehoobi waayaan dhinac uun ha ogolaadaan dhinicii loo jiheeyo.
By Abwaanad Sahra Dahir Mire